Test tatitra avy amin'ny orinasa Shinoa kiraro - Ningbo Lary Industry Teknolojia Co., Ltd
Test tatitra avy amin'ny orinasa Shinoa kiraro
Test Time: 30, Sep,2018
1, Fingotra Shoe hany hamolavola
Ho fanovana eo amin'ny famatrarana taloha lasitra ny habeny 40, Nitombo iray Cover Plate sy ampiarahina amin'ny Vavahady ny fampidirana sy ny mpihazakazaka.
2, fingotra Material
Ny fitaovana avy amin'ny mpanjifa, ny fanasitranana Curve dia toy ambany:
3，Ampitahao eo LRS-165 sy famatrarana milina:
1.Test 1: mitovy ara-nofo sy ny hamolavola
Shoe hany hamolavola
Same, ihany no nampitombo ny tsindrona mpihazakazaka
Same，NBR avy ao amin'ny orinasa kiraro
Shoe hany Weight
2.Test 2: ahazoana fingotra Testing
LRS-165 koa dia afaka mamokatra ny mandroatra fingotra, ny lanjan'ny vokatra farany dia 526g, mihena 13% ny lanjan'ny noho ny santionany avy amin'ny kiraro orinasa.
1.Farafaharatsiny 50% ny vidin'ny asa famonjena
Ny fanasitranana fotoana LRS165 ihany ny antsasaky ny kiraro irery famatrarana milina;
Ny mpiasa ihany no tokony hitondra ny entana vita, tsy misy fahaiza-manao takiana.
Mpiasa iray dia afaka miasa mora foana 2-3 milina( 4-6lasitra)
2.Vonjeo 70g fingotra ara-nofo ho an'ny tsirairay kiraro roa irery
antony: Rehefa mampiasa milina amin'ny famatrarana, ny fingotra dia nilanja fitaovana sy sheared tanana. Mba feno lavadavaka hameno ny lasitra, Matetika ny mpiasa kosa dia mainka zavatra eo amin'ny bobongolo. Raha tsy izany dia hahatonga ny tsy fahampian'ny tsininy.
Ny hany kiraro fingotra LRS165 tsindrona milina tanteraka automated, ny famahanana ary milanja dingana ho fehezin'ny ny plc, ary ny marina no hahatratra ny 1 gram in 300g. Rehefa sheared afovoan'ny tsipika ny kiraro faladianao, Ny hatevin'ny LRS165 symmetrical santionany dia ny tampony ary manifinify kokoa noho milina santionany amin'ny famatrarana.
3. Ny Abrasion Resistance fampisehoana betsaka kokoa, avy amin'ny 120 ny 90 (The Test tatitra avy amin'ny kiraro orinasa)
antony: Ny fampidirana ny teknolojia sy ny lehibe indrindra Clamping Pressure Force Nihatsara ny fanamiana sy ny sakan'ny ambony hakitroky ny kiraro fingotra faladianao. Marina avo fanaraha-maso hentitra ny hafanana manaraka ny tari-dalana amin'ny ara-teknika takian'ny ny Vulcanization Curve.
4. Hampihenana ny Invest ny kiraro Lasitra
antony: Ny hany kiraro orinasa dia tokony hanana ny hampitombo isa ny lasitra mba maika ny baiko maika. Fa raha ny fahombiazan'ny kokoa, dia hanampy mba hampihena ny lasitra fampiasam-bola.
5. Manatsara toetra ny kiraro hany
antony: Automatic sy Fanombanana marina fingotra, Fanamiana hatevin'ny ny kiraro irery, ary avo fanaraha-maso ny fametrahana mazava tsara ny mari-pana, Fanerena ary nanasitrana Time.
Ny kiraro fingotra faladianao vita avy any LRS165 no tsara kokoa
6. Hampiroborobo ny orinasa Brand Image
antony: Ambony sy ny fitaovana Automatic, Ambony Miasa Condition, mahomby Production, Kalitao avo entana.
HIVERINA tsy misy
MANARAKA tsy misy